Ngubani ophethe umthwalo wobufakazi? Ukungabikho kobuthixo kunye neTheism
Ukungabikho kobuthixo kunye neTheism
Ingqiqo "umthwalo wobubungqina" ibalulekile kwimibambano - nabani na abanomthwalo wobungqina bunyanzelekile ukuba 'baqinisekise' amabango abo ngendlela ethile. Ukuba umntu akanalo umthwalo wobungqina, ke umsebenzi wabo ubulula kakhulu: konke okufunekayo kukuba bamkele amabango okanye baxelele apho baxhaswa khona.
Ngoko akumangalisi ukuba ezininzi iingxoxo, eziquka abo bangakholelwa kuThixo kunye neengqungquthela , ziquka iingxoxo zesibini malunga nomntu onomthwalo wobungqina kunye nokuba kutheni.
Xa abantu bengakwazi ukufikelela kwisivumelwano esithile kuloo mbandela, kunokuba nzima kakhulu kulo lonke uxoxiswano ukufezekisa kakhulu. Ngako oko, ngokuqhelekileyo kuluvo oluhle ukuzama ukuchaza kwangaphambili ukuba ngubani onomthwalo wobungqina.
Ukubonakalisa nokuMangalelwa kwamabango
Into yokuqala yokugcina engqondweni kukuba ibinzana elithi "umthwalo wobubungqina" ligqithise ngakumbi kunezinto ezifunekayo ngokwenene. Ukusebenzisa eli binzana lenza ukuba live ngathi umntu uqinisekisile, ngaphandle kokungathandabuzeki, ukuba into yinyani; ukuba, nangona kunjalo, akunjalo kuphela. Ileta echanekileyo iyakuba "ngumthwalo wemali" -ngundoqo kukuba umntu kufuneka axhase oko bathethayo. Oku kunokubandakanya ubungqina obunobomi, iingqinisiso ezinengqiqo, kunye nobungqina obuchanekileyo.
Yiyiphi yala maxwebhu ekufuneka ihanjiswe iya kuxhomekeka kakhulu kumgangatho wesibango esicatshulwayo. Ezinye izimangalo zilula kwaye zilula ukuxhasa kunabanye - kodwa kungakhathaliseki, ibango ngaphandle kwenkxaso ayikho enye efanelekileyo inkolelo yenkolelo.
Ngaloo ndlela, nabani na owenza ibango abayicinga ngokucacileyo kwaye balindele ukuba abanye bayamkele kufuneka banike inkxaso ethile .
Ukuxhasa amaBango akho!
Umgaqo osisiseko ngakumbi ukukhumbula apha kukuba umthwalo othile wobungqina uhlala ulala nomntu owenza ibango, kungekhona umntu ovalelwa ibango kwaye onokungakholelwa okokuqala.
Ngokwenza oko, oko kuthetha ukuba umthwalo wokuqala wobubungqina uhlala kunye nalawo ecaleni kwe -ism, kungekhona nalabo abasecaleni likaThixo. Bobabini abangakholelwa kuThixo no-theist mhlawumbi bavumelana ngezinto ezininzi, kodwa i-theist egxininisa inkolelo enkulu ekukholeni.
Le mabango angekho yinto ekufuneka ixhaswe ngayo, kwaye imfuno yenkxaso engqiqo, enengqiqo ebango ibaluleke kakhulu. Indlela yokwethemba , ukucinga okucokisekileyo, kunye neengcamango ezinengqiqo yinto evumela ukuba sihluke ingqondo kwizinto ezingenangqondo; xa umntu elahlela loo ndlela, ayishiya nayiphi na inkohliso yokuzama ukuqonda okanye ukubandakanya ingxoxo ecacileyo.
Umgaqo othi ummangali unomthwalo wokuqala wobugqwetha udlalwa, nangona kunjalo, kwaye akuqhelekanga ukufumana umntu esithi, "Ewe, ukuba ungakholwa ngam, ungangqineli," kungathi ukungabi nalutho ubungqina ngokuzenzekelayo bunikeza ukuthembeka kwisigqibo sokuqala. Nangona kunjalo oko akunjalo - ngokwenene, kukukholelwa ngokuqhelekileyo ngokuthi "Ukushiya Umthwalo Wokungqina." Ukuba umntu ubanga into ethile, ayanyanzelekile ukuba ayixhase kwaye akukho mntu unyanzelekile ukuba abonise ubungalunganga.
Ukuba ummangalelwa akakwazi ukubonelela ngenkxaso, ngoko ke ukungaqiniseki kwimeko yokungahloneli .
Singawubona lo mgaqo uboniswe kwinkqubo yobulungisa yaseUnited States apho abaphuli-mthetho abasolwa bengenacala baze baqinisekiswe benetyala (ukungabi namacala kuyimeko engagqibekanga) kwaye umtshutshisi unomthwalo wokubonisa amabango olwaphulo-mthetho.
Ngokwenene, ukukhusela kwimeko yezobugebengu akufuneki nantoni na - kwaye ngamanye amaxesha, xa ushushiso lenza umsebenzi ombi kakhulu, uya kufumana amagosa okhuselo abaphumayo icala ngaphandle kokubiza amangqina ngenxa yokuba ayifumanekanga. Ukuxhaswa kokutshutshiswa kwimiba enjalo kubonakala kubuthathaka kakhulu ukuba ingxabano yokuphikisana ayibalulekanga.
Enyanisweni, ke, ukuba akunakwenzeka oko. Uninzi lwexesha, abo bafunwa ukuxhasa amabango abo banikela into ethile - kwaye yintoni na? Ngelo xesha umthwalo wobuqhetseba ushicilela ukukhusela.
Abo bangamkeli inkxaso kuxhaswa kufuneka babonise isizathu esona sizathu sokuba kungani inkxaso enganeleyo yokuqinisekisa ukuba inkolelo inengqiqo. Oku kungabandakanyekanga ngaphezu kokuphengulula izibonda kwizinto ezithe zatshoyo (okokuthethwa ngamagqwetha okhuselo), kodwa kudla ngokukhawuleza ukwakha impikiswano yokuphikisana nesandi esichazela ubungqina obungcono kunokuba ibango lokuqala liyakuthi (yilapho ummeli wezokukhusela ephakamisa khona icala langempela).
Kungakhathaliseki ukuba impendulo ihlelwe njani, yintoni ebalulekileyo ukukhumbuza apha kukuba enye impendulo ilindeleke. "Umthwalo wobubungqina" akuyona into eqinileyo apho elinye iqela kufuneka lihlale lithwala; Kunoko, yinto ehamba ngokusemthethweni ngexesha lempikiswano njengengxoxo kunye neengxabano. Ngokuqinisekileyo, ungekho mbopheleleko ukuba wamkele naliphi na ibango elinyanisekileyo, kodwa ukuba ugxininisa ukuba ibango ayilungelekanga okanye ilungileyo, kufuneka uzimisele ukuchaza indlela kwaye kutheni. Ukuba ukunyamezela ngokwakho kukubango apho wena, ngaloo mzuzu, unomthwalo wokuxhasa!
UNabucodonosor (aka Nabucco) I-Synopsis
I-Losing Priest 2 - Ngaphambi Kokulandela Imifanekiso
I-Obscure ephezulu kunye nabaPhicothi beMculo bangaphantsi kwama-80s
Iingcaphuno ezikhethekileyo kwiintombi malunga namama
Ukudlala njani umdlalo weBhola eliPhantsi kweBhola yeGalefu (kunye neenguqulelo)